November | 2011 | ပြည်ထောင်စုထဲက ''ပအိုဝ်း''
Last7days: 4,271
Monthly Archives: November 2011	← Go to the Next Page
ပအိုဝ်;လိတ်လဲုင်, ဗဟို;သွဉ်တန်, – ဆက်သွယ်ရန်Published November 26, 2011 | By Admin-Khun	လာမည့် လိတ်ဗဟိုးသွဉ်တန်,ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဒီပို့စ်အောက်မှာ စုဆောင်းတင်ပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သွဉ်တန်,သွားရောက် တက်ရောက်လိုတဲ့ ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမများကို ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ ဒီ သွဉ်တန်,ကျင်းပမည့် နေ့ရက်ကို လူငယ်တော်တော်များများ မေးလာကြပါတယ်။ ဒီတော့ အဲဒီ သွဉ်တန်, ကျင်းပမည့်ရက်၊ ၀င်ခွင့်အတွက် လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်ဆင့်ကို ဒီမှာ စုဆောင်း တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ရက်၊ နှစ်ရက်က ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဆီဆိုင်မြို့မှာရှိတဲ့ ဇ၀နာရာမ စာသင်တိုက်မှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ ပအိုဝ်;လိတ်လဲုင်, ဗဟို;သွဉ်တန်, ဥက္ကဌ ဆရာတော် အရှင်ဘဒ္ဒန္တကောဝိဒ နဲ့ တယ်လီဖုန်းကတစ်ဆင့် တွ့ဆုံ၊ မေးမြန်း၊ လျှောက်ထားခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။
ဆရာတော်ရဲ့ မိန့်ကြားချက်အရ သွဉ်တန်,အတွက် ကျင်းပမည့်နေ့ရက်ကို သတ်မှတ်ရန် လာမည့် သီတင်းတစ်ပတ်မှာ တောင်ကြီးမြို့ရှိ၊ အေးစေတီ ကျောင်းတိုက်မှာ အစည်းအဝေးနှင့်အတူ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ကြမယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ လက်ရှိ ခန့်မှန်းနဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေ ကျင်းပမည့် နေရာတွေကတော့ (တောင်ကြီး-ထီသိမ်;) or (တောင်ကြီး-ဖဲုင်မွိုန်း)တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နေ့ရက်လအတွက်ကတော့ (ဒဲဉ်ရုတ်,ဆန်,)လမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတိအကျကို သိလိုရင်တော့ လာမည့် သီတင်တစ်ပတ်အတွင်း အစည်းအဝေးပြီးတာနဲ့ ဆရာတော်ကို ကျွန်တော် နောက်တစ်ခေါက် ဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့အခါ လျှောက်ထား မေးမြန်းသွားပါမယ်။ အဲဒီအခါမှာ သိရတဲ့ အချက်အလက် အသေးစိပ်တွေကို ဒီပို့စ်အောက်မှာပဲ တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ကြီးမြို့တစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပအိုဝ်;လိတ်လဲုင်, သွဉ်တန်,ကို တက်ရောက်လိုတဲ့ မိတ်ဆွေများ အနေနဲ့လည်း အောက်ဖော်ပြပါ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်သို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။
မေးမြန်းစုံစမ်းရန် ဌာနတွေကတော့ -
တောင်ကြီးမြို့- အေးစေတီကျောင်းတိုက် – ဖုန်း – 081-22701
ဆီဆိုင်မြို့ – ဇ၀နာရာမ စာသင်တိုက် – ဖုန်း – 081-49121
တောင်ကြီးမြို့ – မြို့ဦးကျောင်း – ဖုန်း -081-21729, 09-521 3169, 09-493 78 237 (ဦးသုဇန) သို့လည်း ဆက်သွယ်မေးမြန်း စာရင်းသွင်းနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဆက်သွယ်ရမှာ အခက်ခဲ ရှိခဲ့လျှင်လည်း Comment များ ချန်ထားပေးနိုင်ပါတယ်။
Posted in ပအိုဝ်းစာပေ, သတင်းများ | Leaveacomment	ပအိုဝ်;လိတ်လဲုင်, ဗဟို;သွဉ်တန်, (တွမ်;) သွဉ်တန်,အမဲုင်Published November 25, 2011 | By Admin-Khun	နီပအိုဝ်;ယို လို,မျို,ပဲင်;လိတ်လဲုင်, အ၀်;စွဉ်;လဲ့၊ အ၀်;ကြွို့,အ၀်ကြ, ဟွုန်ဗာ;ထီဗာ;ဖိုနေးလွုမ်,၊ အသွုံ,နွို့နဲုင်းမဲုင်,သေတ၀်း။ အုံနွောင်,အ၀်;နွောင်,ငါလဲ့ မွေးလဉ်း အွဉ်;သ,စားန၀်,သွူ။ ဖေ;ဝွေ;ခြေင် လိတ်အုပ်လဲ့ အီးသွုံ,ဗာ;နဲုင်းမဲုင်, သေတ၀်း၊ ယူ;ဖွီဖွီဖဲုင်ဖဲုင် အွဉ်;ဒျ,ကဲုင်ဗော့,ဒျာ; ထာ,ဆေင်; ထွာဗော့,ဒျာ; ရုံးဆာ;ဖုံသွူ။
ပညာ;သျင်;သီးဖုံ;န၀်, ခါးလားလိတ်ကပေါ; အရေ,ကတန်ဒါ; ကိစ္စဖုံ;ယို ဝွေ,သီးဒင်;ခါ, နေးဗာ;မတ်တန်, တွမ်;အရုတ်န၀်,သွူ။ ထွိုင်;တသေတ၀်း လိတ်တန်;ဖို, နီပအိုဝ်;ဖုံ;န၀်,ခါ သွဉ်ဖေ;စွဉ်; လိတ်အရန်းအ၀်;ရို,ကီလဲ့ သွုံ,လ,ကဲးမဲုင်ကိုဟောင်း အ၀်;ဒေါ့,ကဒျာ;၀င်, နဲုင်းန၀်,ဖုံ;သွူ။
ပွိုးန၀်,မ လိတ်ပအိုဝ်;ယို ဖေ;ကတဉ်;ခွေါင်၊ ဖေ;ကတို,တက်ထင်;ထိုလွေ, အဖဲ့,ဖဲ့,န၀်,၊ နေင်; ၁၃၄၀- ဗာ;? မာ,လွေ,ယင်း အစီ,ဝွေ, ကျောင်,တန်မွဉ်ခြဲင်ကိုသွူ။ အစွို,မဉ်,လီကဟဲ့,ဒါ; ပအိုဝ်; သံဃာ;သာ;သနာ; ရက္ခိတအစွို,ယို ဖန်ပြောင်,လွေ,ဖေ; ပအိုဝ်;လိတ်လဲုင်,စွစ်,လီတာ; ဗဟို;သံ;ဃာ;စွို,တွမ်; ချ,မတ်လွေ,ပါ ထာ,မာ,ရဲဉ်; နဲုင်းဆ,လ,ယိုဖုံ;သွူ။
နီပအိုဝ်;လိတ်လဲုင်,တွမ်; ယေန်;ငဲးရေ, ဖေ;နေးကတဉ်;ခွေါင် ထင်;ထိုတသွောင်းလွဉ်။
နီပအိုဝ်;ကို ပညာ;ရေ,တွမ်; ဗုဒ္ဓဘာ;သာ;အခေ;ခံ; ယေန်;ငဲးရေ, လ,သွူဝင်,တဲင်၊ ဘာ;သာ; သာ;သနာ; ယံလေတောင်;လွဉ်။
ပအိုဝ်;ကို ဒါ;ပညာ;သား ယံလွိုင်;အာလွဉ်။
နီပအိုဝ်;ကို လွောင်;ဗူ;ဖြွမ်းညီ;၊ သွီ;ထီ,ရေ, ယံဟ၀်လွဉ်။
တွမ်;ခမ်းရင်,သား အချင်,ချင်, ကွိုက်,ပေါင်, အုံအ၀်;ရေ, ယံတဉ်;ခွေါင်လွဉ်။
ထာ,မာ,ရဲဉ်;ဆ,ကီယိုအလ, ပအိုဝ်;လို,မျို,တွိုင်, ယံကဒါ;လွဉ် လိတ်ပအိုဝ်;အတွက် ပအိုဝ်;လိတ်လဲုင်, စွစ်,လီတာ;ဗဟို;သံ;ဃာ;စွို,တွမ်; ပအိုဝ်;လိတ်လဲုင်, ယေန်;ငဲးရေ,အစွို, အွဉ်ငါတဲင်၊ ဝေင်,နယ်;အလွောက်, အ၀်;ဗွောင်သွဉ်လွေ,ဖေ; လိတ်ပအိုဝ်;တွမ်; ဗုဒ္ဓဘာ;သာ; ယေန်;ငဲးရေ, အခေ;ခံ; သွဉ်တန်,သွူ။ န၀်,သွူတကာ;တ၀်း ထွာနွောင်,ဆရာ; လိတ်ပအိုဝ်;ဗဟို; သွဉ်တန်,ယိုလဲ့ အ၀်;ဗွောင်မာ,လွေ, စွုမ်;နေင်;နေင်;သွူ။
Posted in ပအိုဝ်းစာပေ | 12 Comments	ခွန်အောင်နိုင်+နန်းနွေးဝေ – စုံတွဲသီချင်းခွေPublished November 17, 2011 | By Admin-Khun	ခွန်အောင်နိုင်နဲ့နန်းနွေးဝေတို့ သီဆိုထားကြတဲ့ (ဆဲုင်,နီတညာ,ထဲင်းတ၀်း) အမည်ရ စုံတွဲသီချင်းခွေကို အွန်လိုင်းနားဆင်ရန်နဲ့ Download ရယူရန် မျှဝေပေးလိုက်ပါပြီဗျာ။ တစ်ခွေလုံး တင်ထားပေးပါတယ်။ Download ယူရန်နဲ့ On-line နားဆင်ရန် Continue Reading ကိုနှိပ်လိုက်ပါဗျာ။ ကျွန်တော့်ဆီမှာ Original Cover မရှိတဲ့အတွက် သီချင်းခေါင်းစဉ်တွေကို VCD Subtitle အကူအညီနဲ့ Photoshop နဲ့ ပြန်ထည့်ထားပေးပါတယ်ဗျာ။
Download လုပ်ရန် သီချင်းခေါင်းစဉ်ပေါ်မှာ Click နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ .. ။ အခက်ခဲများရှိခဲ့လျှင် Comment ချန်ထားခဲ့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ VCD Version ကြည့်လိုသူများအတွက် ခွန်ပအိုဝ်းရဲ့ Youtube Channel ထဲမှာ သွားရောက် ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါကြောင်း …….
Posted in ပအိုဝ်းသီချင်း | 14 Comments	စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်မှ Leading/DirectingPublished November 17, 2011 | By Admin-Khun	Managing လို့ခေါ်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ Leading လို့ခေါ်တဲ့ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှု စကားလုံးနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ တူမလိုလိုနဲ့ မတူပါဘူး။ Managing မှာ Manager တွေရှိတယ်။ အဲဒီမန်နေဂျာတွေ ဘာလုပ်သလဲဆိုရင် မန်နေဂျာတွေဟာ Employee လို့ခေါ်တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ (သို့မဟုတ်) အလုပ်သမားတွေကို စီမံကွပ်ကဲရတယ်၊ တာဝန်တွေ ခွဲဝေသတ်မှတ်ပေးရတယ်။ သူ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ အလုပ်သမားတွေဟာ ပေးအပ်ခွဲဝေထားတဲ့ တာဝန်တွေကို ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်ကြရဲ့လား၊ နောက်ပြီး ကုမ္ပဏီပေါ်လစီ နည်းဥပဒေအတိုင်း လုပ်ဆောင်ရဲ့လား ဆိုတဲ့အချက်တွေကို လိုက်ကြည့်ရပါတယ်။ အဓိကကတော့ ကုမ္ပဏီရဲ့ (Goal or Object) ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေကို ကောင်းကောင်းနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် ဖော်ဆောင်နိုင်ရဲ့လားပေါ့။
Posted in Management-Basic | 1 Comment	ခွန်အောင်နိုင်ရဲ့ – စေ,နိန်းယာ,အွီ; သီချင်းခွေ (မျှော်)Published November 17, 2011 | By Admin-Khun	ခွန်အောင်နိုင် သီဆိုထားတဲ့ (စေ,နိန်းယာ,အွီ;) သီချင်းခွေကို မကြာခင် တစ်ခွေလုံးတင်ပေးပါမယ်။ စောင့်မျှော် နားဆင်၊ Download ကြပါကုန် … ။ www.paohswee.com မှာလည်း ဒီသီချင်းခွေမှ သီချင်းအချို့ကို တင်ထားပြီးသား ရှိပါတယ်။ အဲမှာလည်း သွားရောက် နားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted in ပအိုဝ်းသီချင်း | 1 Comment	စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်မှ OrganizingPublished November 15, 2011 | By Admin-Khun	Management ဆိုတဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်ရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Organizing ကိုမြန်မာလို တိုက်ရိုက်ပြန်လိုက်ရင် (ဖွဲ့စည်းခြင်း။ စုစည်းခြင်း)ပေါ့ Getting Together (or) Bringing Together လို့ပြောရင် ပိုရှင်းမယ်ထင်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အင်္ဂလိပ်လို ဒီလိုလေး ပြောလိုက်တော့ ဖတ်ရတာပိုရှင်းသွားလို့ ဒီလိုလွယ်တဲ့ စကားစုတွေနဲ့ပဲ နောက်ပိုင်းတွေမှာ ရေးသွားမယ်ဗျာ။ အချို့ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေကို မြန်မာလိုပြန်ရတာ အရမ်းခက်တယ်။ နှစ်လုံးတည်းနဲ့ ကပ်ရှုပ်တာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ အဲဒါကြောင့်ပါ ဘိုလိုဆန်ချင်လွန်းလို့ မဟုတ်ကြောင်းပါ။ Organizing ဟာ Planning ပြီးရင် နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခု ဖြစ်တယ်။ Organizing ကို getting prepared, getting organized လို့လည်းပြောဆို သုံးနှုန်းကြတယ်။ ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်ရှိပါစေ၊ စုစုစည်စည်းရှိပါစေပေါ့။ ဘယ် စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် မိမိတို့ရဲ့ အဖွဲ့အစည်း (Organization or Company) ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် (Goal) ကိုရောက်အောင် အရောက်လှမ်းကြရတယ်။ အဲဒီတော့ Organizing တာဝန်က အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ (Bringing Together) လုပ်ရတယ်ပေါ့။ ဘာတွေကို Bringing Together လုပ်မှာလဲ။ Resources လို့ခေါ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အရင်းအမြစ်တွေပေါ့။ ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ Financial လို့ခေါ်တဲ့ ငွေရေးကြေးရေး၊ Physical Resources လို့ခေါ်တဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရမှာ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယတွေ၊ နောက် (Human Resources) လို့ခေါ်တဲ့ လူ့အရင်းအမြစ်တွေ တစ်နည်းအားဖြင့် ၀န်ထမ်းတွေပေါ့။ အဲဒီအစရှိသည်ကို Bringing Together လုပ်ရပါတယ်။
Posted in Management-Basic | Leaveacomment	စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်မှ PlanningPublished November 12, 2011 | By Admin-Khun	Planning ဆိုတာ ကြိုတင်စီစဉ်မှုပါပဲ။ ကျနော်တို့ မိတ်ဆွေတို့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံငံကို ခရီးထွက်တော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဦးဆုံး Plan ချရတယ်မဟုတ်လားဗျာ။ ဘယ်နေ့မှာ ဗီဇာလျှောက်ရမယ်၊ ဘယ်နေ့ဆိုရင် ရမယ်။ ပြီးရင် လေယာဉ်လက်မှတ် Booking တင်ရမယ်၊ ၀ယ်ရမယ် အစရှိသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလိုမှ Plan မလုပ်ပဲ အနားကပ်မှ လောရင်တော့ ဗီဇာက အချိန် (၃)ပတ်ပေးရတယ်။ ခရီးက နှစ်ပတ်အတွင်း ထွက်ရမယ်ဆိုရင် အကုန်လုံး လွဲချော်ကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လေယာဉ်လက်မှတ်ကလည်း မရတော့ဘူး။ သွားပြီပေါ့။ အဲဒီလိုပုံစံပါပဲ။ Planning ဟာ Management ဘာသာရပ်မှာ အခြေခံအကျဆုံး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Management System ကြီးကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲ၊ ဦးတည်ချက် (Objectives)တွေကို ဘယ်လို သတ်မှတ်ကြမလဲ အစရှိသည်တို့ကို Planning မှာလုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ Planning ကိုအဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကုမ္ပဏီတွေ၊ လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ လတ်တလော၊ ရုတ်တရက် ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ ပြဿနာတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်တရံမှာ အဲဒီလို ပြဿနာမျိုးဟာ ဘယ်လိုမှဖြေရှင်းလို့မရတာတွေ၊ (Uncontrollable) ထိန်းချုပ်လို့မရတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို လုပ်တော့မယ် ရည်ရွယ်တိုင်း Plan ချပြီးတော့ လုပ်ဆောင်ကြရပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းဖြင့် အမှားရှိခဲ့ရင်တောင်မှ အမှားနဲသွားတဲ့အတွက် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုလည်း တစ်ဖက်မှာ နဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted in Management-Basic | Leaveacomment	← Go to the Next Page